ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်း | ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
မြန်မာနိုင်ငံ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈)၊ ပုဒ်မ ၄၅ အရ “နိုင်ငံတော်သည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရမည်” ဟု ပြဌာန်းထားသည်။ ထို့အပြင် ပုဒ်မ၃၉၀(ခ)အရ“နိုင်ငံသားတိုင်းသည် အောက်ဖော်ပြပါ ကိစ္စရပ် များတွင် နိုင်ငံတော်အားကူညီရန် တာဝန်ရှိသည်။”
ဤအချက်များသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၏ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး စီမံခန့်ခွဲမှုတွင် အမြင့်ဆုံးကတိကဝတ်ကို ဖော်ပြနေသည်။မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ မူဝါဒနှင့် ဥပဒေများအား ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် အတည်ပြုပြဌာန်းခြင်းများလည်း ပါ၀င်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရက နိုင်ငံသားများအတွက် စီးပွားရေးအရခိုင်မာရုံသာမက လူမှုရေးအရနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်း ကျင်ဆိုင်ရာ ရေရှည်တည်တံ့သည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လမ်းကြောင်းတစ်ခုအား ကြေညာခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု မူဘောင် (FESR 2013) နှင့် အမျိုးသား ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်း (NCDP 2011-2030) တို့က ဤမျှော်မှန်းချက်များအား ဖော်ပြလျှက်ရှိသည်။
၄င်း ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေ (ECL 2012 http://www.ecd.gov.mm ) နှင့် နည်းဥပဒေများ (ECL Rules 2014) တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ အားလုံးအပေါ်တွင် သက်ရောက်မှု ရှိသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေ၊ ပုဒ်မ (၇) တွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာ ဝန်ကြီး ဌာန (MOECAF) ၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို သတ်မှတ်ပြဌာန်းထားရာ အောက်ပါအချက်များ ပါဝင် သည်။
ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အသွေး ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် မြှင့်တင်ရေးတို့အတွက် ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွတ်မှုများ၊ ရေဆိုး စွန့်ထုတ်မှုများနှင့် အမှိုက်များ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု နည်းလမ်းများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ထွက်ကုန်များ၏ စံချိန် စံညွှန်းများ အပါအဝင် ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အသွေး စံချိန်စံညွှန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အငြင်းပွားမှုများ ဖြေရှင်းရန် အထောက်အကူပေးခြင်း
စက်မှုလုပ်ငန်း၊ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ ဓာတ်သတ္တုတူးဖော်ထုတ်လုပ်ရေး လုပ်ငန်း၊ အညစ်အကြေး စွန့်ပစ်ရေး လုပ်ငန်းနှင့် အခြားလုပ်ငန်းများတွင် ဓာတုပစ္စည်း သို့မဟုတ် အခြား ဘေးအန္တရာယ်ရှိသည့် ပစ္စည်းများ အသုံးပြုခြင်းနှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများမှထွက်ရှိလာသည့် ဘေးအန္တရာယ်ရှိစွန့်ပစ်ပစ္စည်း၏ အမျိုးအစား နှင့် အဆင့်အတန်းများကို သတ်မှတ်ခြင်း၊
ပတ်ဝန်းကျင်ကို သိသာထင်ရှားစွာ ထိခိုက်စေနိုင်သော ဘေးအန္တရာယ်ရှိ ပစ္စည်းအမျိုးအစားများ သတ်မှတ်ခြင်း၊
စက်မှုနယ်မြေများနှင့် အခြားလိုအပ်သောနေရာ၊ အဆောက်အအုံများတွင် စွန့်ပစ်ရေ သန့်စင်မှုဆိုင်ရာ စည်းကမ်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ စက်၊ ယာဉ်၊ ယန္တရားများ၏ ထုတ်လွှတ်မှုဆိုင်ရာ စည်းကမ်းများ သတ်မှတ်ခြင်း
ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်သည့် စနစ်နှင့် လူမှုရေးအရ ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်သည့် စနစ်တစ်ရပ်ကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်စေခြင်း၊
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများကို အားဖြည့်ရန်အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ညစ်ညမ်းစေသူများက လျော်ကြေးပေးရန်၊ သဘာဝ ဂေဟစနစ်များမှ အကျိုးအမြတ်ရရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းများကို ရန်ပုံငွေ ထည့်ဝင်စေရန်၊ သဘာဝသယံဇာတများ ထုတ်ယူရောင်းဝယ်သုံးစွဲသည့် လုပ်ငန်းများမှ အခွန်ကောက်ခံခြင်းအား ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းများတွင် ထည့်ဝင်စေရန် စီမံခန့်ခွဲခြင်း။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အသွေး စံချိန်စံညွှန်းများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ချက်နှင့် လူမှုရေးအရထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ချက်အား ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ အခြေအနေအရ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြောင်းလဲ ဖြစ်ပေါ်နေသော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်အလို့ငှာ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဌာန (ECD) နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာ ၀န်ကြီးဌာန (MOECAF) တို့က တိကျသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို သေချာစွာသိရှိမထားသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား ထပ်ဆောင်း သတင်းအချက်အလက်များအား ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။
ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဌာန (ECD) သည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်သည့် စနစ်အသစ်အား စမ်းသပ်ရန် အတွက် အခြားဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်လျှက်ရှိသည်။ (၂၀၁၄) ခု နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဌာန (ECD) က ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စီမံကိန်းပေါင်း ၁၂၃ ခုကျော်အား ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်မှု အတွက် ထောက်ပံ့လမ်းညွှန်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများ စီစဉ်ပြုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ စီမံကိန်း အများစု ထဲမှ (၄၀)ခုမှာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်ချက်များ ပြုလုပ်ပြီးဖြစ်သော စွမ်းအင်၊ အခြေခံ အဆောက်အအုံ နှင့် ကုန်ထုတ် လုပ်ရေးစီမံကိန်းများ ဖြစ်ကြသည်။
ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဌာန (ECD) သည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်သည့် စနစ်အသစ်အား စမ်းသပ်ရန် အတွက် အခြားဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်လျှက်ရှိသည်။ (၂ဝ၁၄) ခု နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဌာန (ECD) က ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စီမံကိန်းပေါင်း ၁၂၃ ခု ကျော်အား ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်မှု အတွက် ထောက်ပံ့လမ်းညွန်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများ စီစဥ်ပြုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ စီမံကိန်း အများစု ထဲမှ (၄ဝ) မှာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်ချက်များ ပြုလုပ်ပြီးဖြစ်သော စွမ်းအင်၊ အခြေခံ အဆောက်အအုံ နှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်ရေး စီမံကိန်းများ ဖြစ်ကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဥပဒေအား မိမိတို့နှင့်ကျွမ်းဝင်နားလည်လာအောင် ပြုလုပ်ရန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ များအား များစွာတိုက်တွန်းလိုပါသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် နိုင်ငံမှချမှတ်ထားသော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းမူ ဘောင်များအား လိုက်နာခြင်းအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ တာဝန်ယူသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မြှင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်း စဉ်အား ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် အခြားတိုင်းပြည်များရှိ၄င်းတို့ လုပ်ငန်းများတွင် ကျင့်သုံး လျှက်ရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စံချိန်စံညွှန်းများအား မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်နိုင်စေရေးအတွက် စံချိန်စံညွှန်းများ သတ်မှတ်ရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည်။
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေ (၂ဝ၁၂)
အင်္ဂလိပ်နှင့် မြန်မာဘာသာအတွက် http://www.ecd.gov.mm/law တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး နည်းဥပဒေများ (၂ဝ၁၃)
တရားဝင် ရုံးသုံး ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေမှာ မြန်မာဘာသာနှင့်သာ ထုတ်ပြန်ထားပါသေးသည်။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ပြုစုထားသည့် အဆိုပါနည်းဥပဒေမူကြမ်းမှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ရန် ပံ့ပိုးပေးထားသော်လည်း တရားဝင် ရုံးသုံးအဖြစ် ကိုးကားနိုင်ခြင်း မရှိသေးပေ။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာနှင့် မူကြမ်းသို့ ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုရန်
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း (EIA) လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (၂ဝ၁၆)
တရားဝင် ထုတ်ပြန်ထားသော မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများမှာ မြန်မာဘာသာဖြင့်ထွက်ရှိနေပါပြီ။
http://www.ecd.gov.mm/sites/default/files/Law PDF/EIA procedure.pdf
ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာ ဝန်ကြီးဌာနက ကမ္ဘာ့ဘဏ်နှင့် JICA ကဲ့သို့သော မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၏ ကျွမ်းကျင်မှုဖြင့် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသော အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်၏ ဗဟိုချက် ပတ်ဝန်းကျင် အစီအစဥ်မှ နည်းပညာအထောက်အပံ့ ရယူကာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအား ပြောင်းလဲတိုးတက်စေခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ပိုမိုလေ့လာလိုသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအနေနှင့် အောက်ပါလိပ်စာများတွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
အထက်ပါလိပ်စာများသည် သတင်းအချက်အလက် ရရှိစေနိုင်ရန်အတွက်သာ ရည်ရွယ်ထားပြီး နောက်ဆုံး သတင်းအချက်အလက်များ ရရှိနိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် နောက်ဆုံး သတင်းအချက်အလက်များအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဌာနတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှု လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအား တောင်းယူရရှိနိုင်ပါသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေး စံချိန်စံညွန်းများ (EQS) (၂ဝ၁၆)
တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားသော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေး စံချိန်စံညွှန်းများ မှာ ယခုအခါ မြန်မာဘာသာဖြင့် ထွက်ရှိပြီဖြစ်ပါသည်။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေး စံချိန်စံညွှန်းများ (၂၀၁၆) မှာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန် အတွက် အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ သို့သော်မူကြမ်းအနေဖြင့်သာ တည်ရှိနေသေးသည့်အတွက် ဥပဒေကြောင်းအရ တရားဝင် ရည်ညွှန်းကိုးကားရန် မဖြစ်နိုင်သေးပါ။
အောက်တွင် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း သို့မဟုတ် စီမံခန့်ခွဲမှုကဏ္ဍနှင့် ဆက်စပ်သည့် ဥပဒေများအား မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်စေရန် ဖော်ပြပေးထားသော်လည်း အချိန်နှင့်အမျှ ပြုပြင်ပြောင်းလဲနေဦးမည်ဖြစ်သဖြင့် ဥပဒေကြောင်းအရ တရားဝင် ရည်ညွှန်းကိုးကားရန် မဖြစ်နိုင်သေးပါ။
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းများအတွက် စာချုပ်စာတမ်းများ စာရင်းအား ပတ်ဝန်းကျင်ဥပဒေနှင့် ဆက်စပ်သည့် အနက်အဓိပ္ပာယ်၊ ရည်ညွှန်းချက်များနှင့်တကွ အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ကနဦး ပတ်ဝန်းကျင် ဆန်းစစ်ခြင်း (IEE)
ကနဦး ပတ်ဝန်းကျင် ဆန်းစစ်ခြင်း ဆိုသည်မှာ စီမံကိန်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း သို့မဟုတ်ဎန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခု၏ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အကျိုးသက်ရောက်မှုများသည် သိသာထင်ရှားမှု ရှိ မရှိ၊ ပတ်ဎန်းကျင် ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ခြင်း ရှိမရှိ နှင့် သတ်မှတ်ထားသော အခြား စာရွက်စာတမ်း အထောက်အထားများ ပြုစုတင်ပြရန် လိုအပ်ခြင်း ရှိ မရှိ စစ်ဆေးခြင်းကို ဆိုလိုသည်။
[ရည်ညွန်း : ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေ (ECL) နည်းဥပဒေများ ၂ဝ၁၄ (ပုဒ်မ ၂ စ )
ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း (EIA)
ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း ဆိုသည်မှာ ဆောင်ရွက်ရန် အဆိုပြုထားသော စီမံကိန်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုခုကို ခွင့်ပြုရန် သင့် မသင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်ရေးအတွက်ယင်းလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်၏ ရုပ်ပိုင်း၊ ဂေဟစနစ်၊ လူနှင့် သက်ရှိလောက (ကျန်းမာရေးနှင့် လူမှုစီးပွား ထိခိုက်ခြင်းတို့အပါအဝင်) တို့အပေါ် ထင်ရှားသိသာစွာ ထိခိုက် ပြောင်းလဲမှု ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့် အလားအလာများ သို့မဟုတ် ထိခိုက် ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဥ်များရှိ မရှိ စနစ်တကျ ဆန်းစစ်သည့် လုပ်ငန်းကို ဆိုလိုသည်။[ရည်ညွန်း: ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး နည်းဥပဒေများ ၂ဝ၁၄ (ပုဒ်မ ၂ ဃ)]
အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည့်(SIA, ESIA, HIA, ESHIA) တို့နှင့်လည်း ဆက်စပ်နေသည်။
လူမှုရေးအရ ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း (SIA)
လူမှုရေးအရ ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း ဆိုသည်မှာ စီမံကိန်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်မှု တစ်ခု၏ လူမှုရေးဆိုင်ရာ အကျိုးဆက်များအား ပတ်ဝန်းကျင်ဥပဒေနှင့် ဆက်စပ်ပြီး စနစ်တကျ အကဲဖြတ်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုရေးအရ ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း (ESIA)
ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုရေးအရ ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း ဆိုသည်မှာ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာနှင့် လူမှုရေးအရ ထိခိုက်မှုများ အကြားရှိ ဆက်စပ်မှုများအား တပေါင်းတစည်းတည်း နည်းလမ်းဖြင့် အကဲဖြတ်ပြီး တရားဝင် သတ်မှတ်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။
ကျန်းမာရေး ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း (HIA)
ကျန်းမာရေး ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း ဆိုသည်မှာ စီးပွားရေးကဏ္ဍ အသီးသီးရှိ စီမံကိန်းများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ ၀န်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်မှုများ၏ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်မှုများအား အရည်အတွက်၊ အရည်အချင်းနှင့် ပါ၀င်ဆောင်ရွက်မှု နည်းပညာများဖြင့် စနစ်တကျ အကဲဖြတ်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်မှုစစ်တမ်းမှာ ရောဂါဖြစ်ပွားခြင်းနှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိစေခြင်းများကို ကာကွယ်ရန်နှင့် ကျန်းမာရေးမြှင့်တင်မှုများအား တက်ကြွစွာဆောင်ရွက်ရာတွင် ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ခြင်းများ၌ အထောက်အကူပြုရန် ရည်ရွယ်သည်။
ပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမှုရေးနှင့် ကျန်းမာရေး ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း (ESHIA)
ပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမှုရေးနှင့် ကျန်းမာရေး ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်း ဆိုသည်မှာ လျာထား စီမံကိန်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ ၀န်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်မှုများသည် လူနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ကောင်းကျိုးဖြစ်ပေါ်စေရန် အလို့ငှာ ပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမှုရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှု များအား စနစ်တကျ သက်သေပြုခြင်း၊ အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲခြင်းတို့ဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသည့် နည်းလမ်းတစ်ခုပင် ဖြစ်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမှုရေးနှင့် ကျန်းမာရေး ထိခိုက်မှုစစ်တမ်း တစ်ခုမှာ စီမံကိန်း မစတင်မီမှသည် လုပ်ဆောင်နေဆဲနှင့် စီမံကိန်း ပြီးဆုံးချိန်ထိ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရသည့် ပါ၀င်ဆောင်ရွက်မှု လုပ်ငန်းစဉ် တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်၊ လူမှုရေးနှင့် ကျန်းမာရေး ထိခိုက်မှုစစ်တမ်း တစ်ခုအနေနှင့် စီမံကိန်း၊ စီးပွားရေး၊ ၀န်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခု၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအား တရားဝင် သတင်းထုတ်ပြန်သင့်သည်။
ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ် (EMP)
ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ် ဆိုသည်မှာ စီမံကိန်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၊ ၀န်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်မှု တည်ဆောက်ခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခြင်း၊ ရပ်စဲခြင်း၊ ပိတ်သိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့် ဆောင်ရွက်မှုကြောင့် လည်းကောင်း၊ ယင်းသို့ ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အခြား အကြောင်း တစ်ခုခုကြောင့်လည်းကောင်း ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဆိုးကျိုးသက်ရောက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်ဖြစ်စေ၊ ရှောင်လွှဲရန်ဖြစ်စေ၊ ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှု လျော့နည်းရန်ဖြစ်စေ ဆောင်ရွက်မည့် နည်းလမ်းနှင့် အစီအစဉ်များ ဖော်ပြသည့် စီမံချက်ကို ဆိုလိုသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေ ပြောင်းလဲမှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို စောင့်ကြည့်လေ့လာမည့် အစီအစဉ်များနှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုဆိုင်ရာ အရေးပေါ်အခြေအနေနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး ကြိုတင်စီမံ ထားရှိမှုများ ပါ၀င်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာ ၀န်ကြီးဌာန၏ လိုအပ်ချက်နှင့် လမ်းညွှန်မှုအရ ပြင်ဆင်ထားရှိရမည့် စီမံကိန်း စာရွက်စာတမ်း ဖြစ်သည်။
[ရည်ညွှန်း: ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး နည်းဥပဒေများ ၂၀၁၄ (ပုဒ်မ ၂ ဆ)]
(ဤစနစ်သည် လက်ရှိ အသုံးမပြုသေးသော်လည်း မကြာမီကာလတွင် အသုံးပြုလိမ့်မည် ဖြစ်သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ ကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်ရန် အကိုးအကားအနေဖြင့် ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်သည်။)
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စိစစ်မှု ဆိုသည်မှာ အောက်ပါတို့ကို သတ်မှတ်ရန် အချိန်ကာလ အပိုင်းအခြား အလိုက် စနစ်တကျ မှတ်တမ်းပြုလုပ်၍ ဓမ္မဓိဌာန်ကျကျ အကဲဖြတ်ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။
(၁) ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ကွပ်ကဲမှုဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှုအခြေအနေ၊
(၂) ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၊
(၃) အဆောက်အအုံ၊ မြေနေရာနှင့် ဥပစာများတွင် ဖြစ်နိုင်သော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အန္တရာယ်အမျိုးမျိုး
[ရည်ညွန်း : ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေ ၂ဝ၁၂ (ပုဒ်မ ၂ဃ)]
ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အသွေး စံချိန်စံညွန်း (EQS)
ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အသွေး စံချိန်စံညွန်း (EQS) သည် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူသားတို့၏ ကျန်းမာရေး ကာကွယ်ခြင်းများအတွက် လိုက်နာ သင့်သော ပတ်ဎန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေးများအား တိုင်းတာ နိုင်သည့် စံချိန်စံညွန်းများကို ရည်ညွန်းပါသည်။ ပတ်ဎန်းကျင် အရည် အသွေး စံချိန်စံညွန်း (EQS) သည် ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်း မှုအား လျှော့ချရန် (သို့) ကာကွယ်ရန် အတွက် အခြေခံကျသောအသံနှင့် တုန်ခါမှုများ၊ လေထုတွင်းသို့ ထုတ်လွတ်ခြင်းများ၊ အရည်စွန့်ပစ်မှုများ အတွက် လိုက်နာရမည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ဖြစ်ပါသည်။ တရားဝင် ထုတ်ပြန်ထားသော ပတ်ဝန်းကျင်အရည်အသွေး စံချိန်စံညွန်းအား အထက်ဖော်ပြပါ link တွင် ရယူပါ။
[ရည်ညွန်း : ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း ရေး ဥပဒေ ၂ဝ၁၂ (ပုဒ်မ ၂(ဂ))နှင့် ပတ်ဎန်းကျင်အရည်အသွေး စံချိန်စံညွန်း ၂ဝ၁၆]
ဖြည့်စွက် မေးခွန်းများနှင့် အဖြေများ
၁. မည်သို့သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် ကနဦး ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သုံးသပ်စစ်ဆေးခြင်း (IEE) သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု စစ်တမ်း (EIA) တို့အား လုပ်ဆောင်ရန် ဥပဒေအရ လိုအပ်သနည်း။
ကနဉီး ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သုံးသပ်စစ်ဆေးခြင်း (IEE) နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု စစ်တမ်း(EIA) မှာ အမျိုးမျိုး သော လုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ အတွက် လိုအပ်ပါသည်။ မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုစစ်တမ်းအား တရားဝင် ထုတ်ပြန်ခြင်းအားဖြင့် စနစ်ကျသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ထားရှိပါသည်။ တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားသော ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု စစ်တမ်းအား အထက်ဖော်ပြပါ link တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် မည်သည့် လုပ်ငန်းများတွင် ကနဉီး ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သုံးသပ်စစ်ဆေးခြင်း (IEE) သို့မဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု စစ်တမ်း (EIA)အား မဖြစ်မနေ လုပ်ဆောင်ရမည်ဆိုသည့် လုပ်ငန်းစာရင်းအား တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု စစ်တမ်း တွင် ကြည့်ရှု၍ရည်ညွန်းသင့်ပါသည်။
အသေးစိတ် ထပ်မံသိရှိလိုပါက ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဌာန၏ နေပြည်တော်ရုံး သို့မဟုတ် ရန်ကုန်ရုံးခွဲသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမပဏီများ ညွန်ကြားမှုဉီးစီးဌာန (DICA) လက်အောက်ရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဌာနမှလည်း အခြား ဆက်သွယ်ရမည့် သတင်းအချက်အလက်များအား ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
၂. မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကနဉီး ပတ်ဝန်းကျင် ဆန်းစစ်ခြင်း (IEE) နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း (EIA) တို့အား မည်ကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်သင့်သနည်း။
လိုအပ်ချက်များအား ရှင်းလင်းချက် :
IEE: ကနဦး ပတ်ဝန်းကျင် ဆန်းစစ်ခြင်း (IEE) အစီရင်ခံစာကို မြန်မာဘာသာနှင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာ နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် တင်ပြရမည် ဖြစ်သည်။
EIA: ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း (EIA) လုပ်ဆောင်ရာတွင် ဆက်စပ် သက်သေခံ စာရွက်စာတမ်း အားလုံးအား မြန်မာဘာသာနှင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာ နှစ်မျိုးစလုံးဖြင့် တင်ပြရမည် ဖြစ်သည်။
သက်သေခံ စာရွက်စာတမ်း ပုံစံအမျိုးအစားများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ကြသည်၊
ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု စစ်တမ်း အကဲဖြတ် အစီရင်ခံစာ
ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု စစ်တမ်းဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း ရည်ညွန်းဝေါဟာရများ
ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု စစ်တမ်း အစီရင်ခံစာ
အသေးစိတ်ထပ်မံသိရှိလိုပါကပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဌာန၏ နေပြည်တော်ရုံး သို့မဟုတ် ရန်ကုန်ရုံးခွဲသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာန (DICA) လက်အောက်ရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဌာနမှလည်း အခြားလိုအပ်သည့် သတင်းအချက် အလက်များအား ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ကနဦး ပတ်ဝန်းကျင် ဆန်းစစ်ခြင်း (IEE) နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း (EIA) အစီရင်ခံစာများ ရယူရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန
မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်မှ မိတ္တူ
အစီရင်ခံစာများအား အကဲဖြတ်ရန်နှင့် ထောက်ခံချက်များ ရယူရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များ
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန
၃. မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ချက်တစ်ခု လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် မည်သူက ကူညီထောက်ပံ့နိုင် သနည်း။
မှတ်ပုံတင်ထားသော ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုပေးသော လုပ်ငန်းအမည်စာရင်းအား ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး နှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာန မှ အတည်ပြုသတ်မှတ်ပြီးနောက် ထုတ်ပြန်မည်ဖြစ် ပါသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း လုပ်ဆောင်မှုအတွက် ဝန်ဆောင်မှု ပေးနေသူများ စာရင်း (တရားဝင် အတည်မပြုနိုင်သေး)အား ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဌာန၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် ရရှိနိုင်သော် လည်း အဆိုပါစာရင်းသည် သတင်းအချက်အလက် ရရှိရန်အတွက်သာ ရည်ရွယ်ပြီး တရားဝင် အသိအမှတ်ပြု ထောက်ခံ ခြင်း မဟုတ်ပါ။
နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးနှင့် မူဝါဒရေးရာ၊ လေ့ကျင့်ရေးနှင့် သုတေသန ဌာန
ဖုန်း-ဝ၆၇ ၄၃၁၃၂၅၊ ဝ၆၇ ၄၃၁၃၁၈
သဘာဝ သယံဇာတ ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု စစ်တမ်းဌာန
Myanmar Environmental Information Portal (Myanmar & English language)